RANAIVOARISON JOHNNY - MPITONDRA TENIN’NY MMM : Fitondrana mpamono afo fa tsy fitondrana mpamaha olana ny Hvm
Ranaivoarison Johnny, tanora mpanao politika sy mpamakafaka politika zanak’iToamasina. 12 octobre 2017
Nametrahan’ny antoko Mmm (Malagasy Miara-Miainga) fitokisana ny tovolahy ka voatendry ho mpitondra tenin’ny antoko.
Resadresaka nifanaovana taminy tao Toamasina ny alarobia 11 oktobra lasa teo no hoentina aminao mpamaky. Fanehoan-kevitra izay nahazoany alalana tamin’ny filoha nasionalin’ny Mmm, Hajo Andrianainarivelo.
Ino Vaovao Faritra (IVF) : Malaza ny fikasana fanovàna lalàmpanorenana, ny hevitry ny Mmm ?
Ranaivoarison Johnny (RJ) : Tsy miova amin’ny fomba fijerinay hatramin’izay izahay Mmm. Kajikajy politika no antony hanovan’ny Hvm io lalàmpanorenana io. Manahy ny filoha sao tsy hisy fitoniana politika alohan’ny fifidianana 2018. Antony iray tsy mamparisika azy hametra-pialana 60 andro alohan’ny fifidianana. Fampandriana adrisa ny vahoaka ilay filazana fa mila ovaina io lalàm-panorenana io mba hahatonga ny fokontany ho lasa vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy sakana amin’ny fampandrosoana ny fokontany velively ny lalàm-panorenana ankehitriny raha tena manana finiavana politika ny mpitondra. Tamin’ny alalan’io lalàmpanorenana ankehitriny io, ny fitondrana tetezamita dia nahavita nandoa anjara vola mampihodina ny fokontany mitentina 50 tapitrisa Ariary isan-taona. Tamin’ny alalan’io lalàmpanorenana io, ny fitondrana tetezamita dia nahavita nanome vola 12 tapitrisa Ariary ny kaominina tsirairay teto Madagasikara raha 9 tapitrisa Ariary monja izany talohan’ny taona 2008.
Na inona na inona ny tohan-kevitra aroson’izao fitondrana Hvm izao, dia tsy mahamaika ny fanovàna ny lalàmpanorenana ary manaporofo ny kajikajy politikan’ny Hvm izao fikasan-dratsy efa akaiky fifidianana izao.
IVF : Ka ianareo anie na hanohitra, ny fitondrana misisika ihany e !
RJ : Io no tsy mampitovy fijery anay amin’ny antoko politika hafa. Ny sasany dia manaiky ny hisian’ny fitsapan-kevi-bahoaka fa hanao « tsia ». Izahay dia tsy manaiky ny hisian’ny fanovàna lalàmpanorenana ankatoky ny fifidianana izany mihitsy. Iaraha-mahalala fa fitondrana miorina amin’ny fitaka izao fitondrana izao ka tsy maintsy hanjaka ny hala-bato mba hahafahan’izy ireo mampandresy ny « eny ». Ka na hisisika aza ny Hvm dia tsy handray anjara velively amin’izany fitsapa-kevi-bahoaka izany izahay Mmm. Izahay Mmm mantsy dia anisany nanohana io lalàmpanorenan’ny Repoblika faha-IV io.
IVF : Inona ary no hatao ?
RJ : Tsy misy olana ny fanovàna lalàmpanorenana ho an’izay kandidà hofidiana ho filoham-pirenena ka voafidim-bahoaka eo. Mandritra ny fampielezan-kevitra 2018 ataon’ny kandidà iray te hanova lalàmpanorenana, dia tokony efa ampahafantariny ny vahoaka izay fototra ijoroan’ny firenena tiany hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Rehefa lany eo izy, dia miditra amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka. Sady azo antoka fa handresy ny « eny ». Matoa izy nofidiam-bahoaka, dia mety amin’ny vahoaka ilay lalàmpanorenana efa noresahiny nandritra ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana.
IVF : Hanana kandidà amin’ny fifidianana 2018 ve ny Mmm ?
RJ : Ny Mmm dia manaja hatrany ny fifanarahana Armada, kandidà tokana izay efa natomboka tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy loholona. Mbola mipetraka io fifanarahana io hatramin’izao. Hanohana izay kandidà tokana tapaky ny Armada ny Mmm amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2018.
IVF : Malaza ny pesta, fijerinareo manokana ?
RJ : Ny fitondrana Hvm hatramin’izay nijoroany ka hatramin’izao dia fitondrana mpamono afo fa tsy fitondrana mpamaha olam-bahoaka. Tsy manana politikam-pirenena momba ny fahasalamam-bahoaka akory. Tsy voafehin’izao fitondrana izao akory na ny dingana fohy ezaka aza mba entina hifehezana ny valan’aretina pesta. Tsy mahagaga raha mitombo isa ny maty sy ny marary.
IVF : Hafatra
RJ : Ny Mmm dia antoko sosialy demokraty manao vaindohan-draharaha ny fitsinjaram-pahefana matanjaka. Noho ireo foto-kevitra ireo, na dia tsy eo amin’ny fitondrana aza izahay dia mifanome tanana mandrakariva amin’ireo ben’ny tanàna manerana an’i Madagasikara ary manampy amin’izay azonay anampiana.